Pyonepan Way: June 2013
Posted by Pyonepan Way at 4:09 PM No comments:
ငါ့ ရဲ့ အချစ်တွေလို ပြန်ပြီ ချစ်ဖို့
တူညီမှုမရှိချင်နေပါစေ ငါ့ အချစ်တွေကိုတော့
နင်အသိမှတ်ပြုစေချင်တယ် … ချစ်သူ ..။
နင့် ဘက်က ငါ ကိုအမြဲတမ်း
ငါ့ အချစ်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ စစ်စစ်
နင်ဘက်က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲ တွေးထားနိုင်မှာပေါ့ …. ။
ငါ့ တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ နားလည်မှု ရှိစေချင်ပေမယ့်
ငါ့ ကိုနားလည်မပေးနိုင်ပါဘူး ……. ချစ်သူ …။
နင်ကို ရွေးချယ်ပြီး ချစ်ခဲ့ပေမယ့်
ငါ ကိုယ့်ပိုင်ဘဝထဲမှာနင်ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခွင့်
Posted by Pyonepan Way at 11:27 PM No comments:
လေပြေလိုလွင့်မျောတတ်တဲ့ အချစ်ကိုမှ ဆောကစားမိ့တဲငါ
ကြိမ်ဖန်များစွာစိတ်ဆင်းရဲ ရင်ကျက်ခြင်းတွေလည်း မကယ်နိုင်တော့ဘူး.....
ကောင်မလေးရေ မပွင့်တစ်ပွင့် မင်းနူတ်ခမ်းက လွင့်လာတဲ
စကားမှာမှ သာသာ ယာယာယစ်မူး အချစ်ပန်းအတွက် ငါက
အတွယ်အတာမဲ့ သံယောဇဉ်နဲ့ဆိုလည်း အစထဲက
မပတ်သက် မျှော်လင့်ချက်တွေ မပေးပါနဲလား
ခုတော တောင်ပံ တွေနဲ အမှောင်နံရံ တွေ ကြားရောက်မှ
အဝေးကို ပျံသန်း အဖော်ကွဲတဲ ဇာတ်လမ်းထဲ ငါလည်းပါဝင်ခဲ့ရပြီ....
ပျံပါ ပျံသန်းလိုသွားပါ အတောင်ပံတွေ ညောင်းလို
နင်နားခိုရာ ချစ်သစ်ပင် ဖြူစင်ပါစေလို ငါဆုတောင်းရင်း
တောင်ပံတွေနဲ မင်းက်ို ထာဝရ ချစ်နေမှာပါ........
Posted by Pyonepan Way at 3:28 AM No comments:
ကောင်းခဲ့ တော့ “မီး” ဆိုတာ
ဒုက္ခတွေနဲ နီး နီးလာလိုက်တာ
စားလည်း ရှုး ဘ၀ နဲ
ကိုယ့် သေ တွင်း ကိုတူးတာနဲ
Posted by Pyonepan Way at 3:36 AM No comments:
အနံ့ံအသက်က ဘ၀နဲ့ တစ်သားတည်း
ကောင်းကင်သစ်ပေါ် လှမ်းမျှော်လို့ 
အံကြိတ်ဆုပ်ကိုင် မနိုင်ဝန် တစ်ထမ်းတစ်ပိုးနဲ. ။ ။
Posted by Pyonepan Way at 12:16 AM No comments:
- လိင် သဘောသဘာဝ ပါရှိရမည်။
Posted by Pyonepan Way at 12:07 AM No comments:
နင့် တခဏ ပျော်ရွှင်ဖို့ အတွက်
ရင်ထဲမှာ ငါ ငိုနေတယ်။
အပြင်ဖက် ကို စီးကျမလာတဲ့
အားလုံး ကို မေ့ပစ်ဖို့
ထိုးနက် နှိပ်စက် လာ တဲ့အခါ
အားကိုး တစ်ကြီး မျော်ကြည့်မိ နေတုန်းပဲ။
နင့် မျက်လုံးတွေ ကတော့
တစ်စုံတစ်ယောက် ကို စူးစိုက် ကြည့်ရင်း
နင့် နုတ်ဖျား ကလည်း ငါ့ကို
မသိခဲ့ဘူး ။ မရှိခဲ့ဘူးရယ်လို့ ရွတ်ဆိုကောင်း
အားလုံး ကို မသိယောင်ဆောင်ရင်း
နင့် ဥပက္ခာ လမ်းတွေ
ငါ့မျက်ရည် ငါ့နာကျင်မှု့ နဲ့
Posted by Pyonepan Way at 8:27 PM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 3:10 PM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 5:11 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 4:31 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 2:50 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 12:48 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 8:57 PM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 12:36 AM No comments:
ဂုဏ်ဓန မရှိ သုညအတိ ဖြစ်နေတဲ့
မင်းက သည်းခံကာ ခွင့်လွှတ်ပြီးချစ်ပေးခဲ့တယ်
မပြောတတ်သူကို မင်းက တလေးတစား
ငါ့မှာ ဘ၀င်မကျ ရင်နာရတယ်
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ငါ့ကိုထားသွားမှာကို စိုးထိတ်မိတယ်
ဒီစကားက ငါ့နားဝမှာ အစဉ်ခဏခဏကြားရလို့
မကြာခဏ ငါက ဆင်ဆာဖြတ်တယ်
** Cinthi ( GTC ) **
Posted by Pyonepan Way at 5:44 AM No comments:
ပြည့်ကျပ်လို့နုပျိုပျို ခူးလှည့်လို့ ကြို။
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505049396232641&set=a.115349675202617.18155.100001827559272&type=1&theater မှကြိုက်လို့ ရှယ်ခဲ့တာပါ။
Posted by Pyonepan Way at 6:14 AM No comments:
အရောင်ဆိုးခဲ့ လေ သတဲ့လား။
ဘယ်သောခါမှ မအေးချမ်းလေဘူး သတဲ့လား။
သူမကို လွမ်းဆွတ်ပြရုံ ချစ်ပြရုံနဲ့
ဖုံးကွယ်လို့ရနိုင် လေ သတဲ့လား။
ဒီနေ့နဲ့ဆို ၂၀ ရက်ပေါ့
အံ့ မခန်းပုံချကာ နောက်ကျောဓားထိုးတတ်သူဟာ
ဘ၀တစ်ခု လူမသိ သူမသိ
ဘယ်သူ့အပေါ်မှ မချိုးဖောက်ခဲ့ရပါဘူး သတဲ့လား.။
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=192025957619818&set=at.175837252572022.1073741826.100004372446959.100001861638792&type=1&theater မှကြိုက်လို့ ယူခဲ့ပါသည်။
Posted by Pyonepan Way at 6:30 PM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 12:58 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 2:07 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 1:37 AM No comments:
Posted by Pyonepan Way at 1:14 AM No comments: